ဝဿနျဦး : ဘယ်သူပြိုင်၍ နိုင်မည်နည်း
အလှအတွက် မငဲ့ကွက်ပါတည်း။ ။
သွေးတစ်စက်မျှ မပါတည်း။ ။
ဘယ်မှာစာဖွဲ့ ကုန်မည်နည်း။ ။
ဘယ်သူစာဖွဲ့ နိုင်မည်နည်း။ ။
ဘယ်သူပြိုင်၍ နိုင်မည်နည်း။ ။
/* အမေနေ့အား ဂုဏ်ပြုလျက် ၊ ကျေးဇူးကြီးမား မိခင်များသို့ */
ရေးသူ ၀ဿနျဦး ဒီအချိန်မှာ 11:39 PM
wonderful! wonderful! wonderful! i love it!
အရမ်းကောင်းတယ် သယ်ရင်းရာ။ ကြိုက်တယ်။
အမေ့မေတ္တာကို တိုင်းတာလို့ရတဲ့အရာ ခုထိ မရှိသေးပါဘူးဗျာ။ အမေအားလုံး ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာ ကြပါစေဗျာ။